Gaadiidka isbitaalka kugaynaaya kaana soocelinaay - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Gaadiidka isbitaalka kugaynaaya kaana soocelinaay
Gaadiidka isbitaalka kugaynaaya kaana soocelinaay
Si guud anoo uhadlaaya, waa inaad marinkaaga isbitaalka aad kutagi lahayd kagana soonoqon lahayd aad diyaarsataa. Inta badan bukaanadu ayaga ayaa safarkooda isbitaalka diyaarsada ayagoo gaari uqaadanaaya ama gaadiidka dadwaynaha fuulaaya, ama qof ehelkooda ah uu gaarigiisa kuqaadaayo.
Marka aad raacdo gaarigaaga ama kan ehelkaaga, waxaa lagu siin karaa lacag celis ah. Fadlan laxariir xubin katirsan shaqaalaha markaad isbitaalka tagto si aad macluumaad uga ogaato lacagta laguu celinaayo.
Haddii aan waaxda caafimaadka ee gobalkaagu aysan kuu ogolayn inaad raacdo tareen ama bas, mararka qaar waxaad raaci kartaa gaadiidka bukaanka ee shirkada Gobalka ee Bartamaha Denmark. Xafiiska gaadiidka ayaa go'aansanaaya inaad xaq uleedahay in gaadiid lagugu keeno lagaagana qaado isbitaalka.
Laxariir xafiiska gaadiidka
Lambarka taleefanka xafiiska gaadiidku waa 7023 6248.
Markaad wacdo lambarka, waxaad helaysaa 3 dookh:
Riix 1 – hadaad gaadiid kuqaada sugaysay laakiin uusan kuu imaan
Riix 2 –hadaad noosoo wacayso si aad ucodsato gaadiid
Riix 3 –hadaad noosoo wacayso helista lacagta celiska
Saacadaha shaqada ee xafiisku waa Isniinta ilaa Jamcada, 8 am ilaa 2 pm.